Fitsaboana aretina miteraka | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Fitsaboana aretina miteraka
Ahoana no hikarakarana ny gloxinia ao an-trano: ny fanaraha-maso ny aretina ary ny fitsaboana aretina
Gloxinia dia zavamaniry mitafo miaraka amin'ny voninkazo mahavariana, ravin-kavina ary kofehy somary fohy, izay mpikambana ao amin'ny fianakaviana Gesneriyev. Ao amin'ny tontolo voajanahary, dia hita any amin'ireo ala tropikaly any Peru sy Brezila. Gloxinia dia tsy mendri-piderana, fa mba hitombo sy hivoatra ao an-tokantrano ao an-tokantrano, dia tsy maintsy manao ezaka ny mpamboly.
Lisitra feno fungicides ho an'ny zavamaniry
Ny fungicide dia vovoka izay manafay na manimba ireo karazan'aretina isan-karazany. Misy sokajy maromaro an'io karazana pestizide io, miankina amin'ny hetsika, ny toetry ny simika, ary ny fomba fampiharana. Avy eo, dia manolotra lisitra feno fungicides isika, natolotra tamin'ny endriky ny lisitry ny endrika malaza indrindra ho an'ny zavamaniry misy anarana sy famaritana azy ireo.
"Ordan" fungicide: torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Ny dokotera "Orden" dia manolo-tena hiaro ny voaloboka, tongolo, voatabiha, kôkôma, ovy ary ny alika hafa avy amin'ny aretim-panafody. Ny fitaovana maro dia miteraka fitsaboana tafahoatra ho an'ireo fitaovana mivaingana ary tsy afaka miatrehina amin'ny aretina efa lasa, alteranriosis, ary peronospora. Io toetra io no mampiavaka ny fôsily "Ordan", izay tsy ahitana voka-tsoratra izay mety hampifanaraka ny fungi.
"Previkur Energy": famaritana, fananganana, fampiharana
Ny zaridaina tsirairay dia mila mandresy ireo hazo sy kirihitr'ala avy amin'ny bibikely tsy azo sitranina ary mitondra amin'ny aretina. Samy manana ny fomba fiasany manokana ny tsirairay amin'izy ireo, manana traikefa. Misy zava-mahadomelina maro eny an-tsena ho an'ireo tanjona ireo, ary ankehitriny dia hiresaka momba ny iray amin'ireo antsoina hoe Previkur Energy isika.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fitsaboana aretina miteraka